Mika 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔama Yehowa bepɔw so (1-5)
Wɔde wɔn mfoa bɛyɛ nsɔw (3)
‘Yɛbɛnantew Yehowa din mu’ (5)
Wɔbɛsan akyekye Sion bio ama ayɛ den (6-13)
4 Awiei nna* no mu no,Yehowa fi bepɔw+Betim wɔ mmepɔw atifi,Na wɔbɛma so asen nkoko,Na amanaman bɛsen yuu akɔ hɔ.+ 2 Na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ: “Mommra mma yɛmforo nkɔ Yehowa bepɔw so,Nkɔ Yakob Nyankopɔn fi.+ Ɔbɛkyerɛ yɛn n’akwan,Na yɛbɛnantew n’akwan so.” Na Sion na mmara* befi,Na Yerusalem na Yehowa asɛm befi. 3 Obebu atɛn wɔ aman pii mu,+Na obesiesie nsɛm ama aman akɛse a ɛwɔ akyirikyiri. Wɔde wɔn mfoa* bɛyɛ nsɔw,Na wɔde wɔn mpeaw ayɛ kantankrankyi.*+ Ɔman bi rentwe sekan wɔ ɔman bi so,Na wɔrensua akodi bio.+ 4 Wɔn mu biara bɛtena ne bobe ne ne borɔdɔma dua ase,+Na obiara renhunahuna wɔn,+Efisɛ asafo Yehowa ano na aka. 5 Na aman no mu biara bɛnantew ne nyame din mu,Na yɛn de, yɛbɛnantew Yehowa, yɛn Nyankopɔn din mu+ daa daa. 6 Asɛm a Yehowa aka ni: “Saa da no,Mɛboaboa wɔn* a na wɔtɔ gu wɔn nan so no ano,Na maka wɔn* a wɔahwete no aboa ano,+Ɛne wɔn a mema wohuu amane no. 7 Wɔn* a na wɔtɔ gu wɔn nan so a wɔaka no, mɛkora wɔn so,+Na wɔn a wɔapam wɔn kɔ akyirikyiri no, mɛyɛ wɔn ɔman kɛse;+Na Yehowa bedi wɔn so hene wɔ Sion Bepɔw so,Fi nnɛ kosi daa. 8 Na wo, O aban a wogyina so bɔ nguan ho ban,Sion babea bepɔw ketewa,+Wo nkyɛn na ɛbɛba, yiw, wo nkyɛn na tumidi a edi kan* no bɛba,+Ahenni a ɛyɛ Yerusalem babea de no.+ 9 Adɛn nti na woreteɛteɛm denneennen saa? Adɛn, wunni ɔhene biara,Anaa nea otu wo fo awu,Ma enti wote yaw te sɛ ɔbea a ɔrewo?+ 10 O Sion babea, bu fa so na peneTe sɛ ɔbea a ɔrewo,Efisɛ seesei wubefi kurow mu akɔtena wuram. Wobɛkɔ ara akodu Babilon.+Na ɛhɔ na wobegye wo;+Ɛhɔ na Yehowa bɛtɔ wo afi w’atamfo nsam.+ 11 Afei aman pii bɛboa wɔn ho ano aba wo so;Wɔbɛka sɛ, ‘Ma ne ho ngu fĩ,Na ma yɛmfa yɛn ani nhu sɛ eyi ato Sion.’ 12 Nanso wonnim Yehowa adwene,Na wonnim ne tirim asɛm;*Efisɛ ɔbɛboaboa wɔn ano te sɛ hwiit* a wɔatwa no foforo aboa ano akuwakuw agu awiporowbea. 13 O Sion babea, sɔre na porow;+Na mɛma wo mmɛn adan dade,Na wo nan adan kɔbere,Na wobɛyam aman pii. Wubehyira wɔn mfaso bɔne no so ama Yehowa,+Na woahyira wɔn ahode so ama nokware Awurade a odi asaase nyinaa so no.”+
^ Anaa “Awiei mmere.”
^ Anaa “asekan a wɔde kɔ ɔko.”
^ Nt., “ɔbea no.”
^ Anaa “wo nkyɛn na kan tumidi.”
^ Anaa “n’atirimpɔw; n’agyinatu.”